Mkpanaka Led Trailer
Ụgbọala eburu ụzọ
Ụgbọ ala Stage
Igwe ihe nhịahụ anwụ anwụ
Ihe gbasara JCT
Ntụle dị nkenke nke ihe kpatara ụgbọala mgbasa ozi ekwentị mkpanaaka LED ji ewu ewu n'ahịa
Mgbe a bịara n'ụgbọ mgbasa ozi ekwentị mkpanaaka LED, ọtụtụ ndị abụghị ihe ijuanya. Ọ na-ebupụta mgbasa ozi n'okporo ámá n'ụdị ihuenyo ngosi ngosi nke ụgbọ ala LED. Dị ka iji n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ nwere nnukwu ewu ewu ahịa na ndị ọrụ nwere ike ito ya nke ukwuu. Ihe kpatara o ji ewu ewu na amara...
Nyocha ahịa nke LED Media Vehicles mgbazinye azụmaahịa
A maara ụgbọ ala mgbasa ozi LED dị ka ọgbọ nke anọ nke ike ndụ ndụ. A na-ejikarị ya eme ihe na ngalaba mgbasa ozi mgbasa ozi. Ndị ahịa mgbazinye ụgbọ ala mgbasa ozi LED kwuru na ụgbọ ala mgbasa ozi LED ji akọ na-ejikọta nnukwu ihuenyo na ụgbọ ala. Ụdị ihe nkiri vidiyo nwere akụkụ atọ h...
Ụgbọ ala Stage - Soro gị na-aga nke ọma
Site n'ịba ụba nke ndụ oge ndị mmadụ na-enwe ohere, ụgbọ ala ọgbara ọhụrụ ewepụtala nwayọ. The mobile ogbo ụgbọ bụghị nanị na-agbakwụnye ụfọdụ mmasị na ndị mmadụ ndụ na-agwụ ike, kamakwa ...
Ndụmọdụ ụfọdụ maka ojiji na mmezi nke gwongworo mgbasa ozi kwa ụbọchị
Ọ na-eru nso na njedebe nke afọ ọhụrụ. N'oge a, ire gwongworo mgbasa ozi na-ewu ewu nke ukwuu. Ọtụtụ ụlọ ọrụ chọrọ iji gwongworo mgbasa ozi ree ngwaahịa ha. Ahịrịokwu a enwetala ọnụ ahịa ire ahịa dị ọkụ nke gwongworo mgbasa ozi. Ọtụtụ ndị enyi na-h...
Ogo nke ụgbọ ala mgbasa ozi mkpanaka n'èzí dabere na nhọrọ nke akụkụ isi niile
Ụgbọ ala mgbasa ozi mkpanaka n'èzí bụ nke ọtụtụ ndị maara nke ọma. Mgbe ọtụtụ ndị na-azụta ngwaahịa a, ha na-etinyekwu uche na àgwà nke ụgbọ mgbasa ozi, na àgwà nke ụgbọ ala mgbasa ozi na-adabere na nhọrọ nke otu igodo dum, mgbe ahụ, ebe a Gịnị ka ha na-elebara anya ...
Ụgbọ ala mgbasa ozi LED nwere uru ị na-amaghị
Ụgbọ ala mgbasa ozi nke ikanam bụ ngwa mgbasa ozi n'èzí a na-ejikarị eme ihe ugbu a. Ọ na-eji ihe mgbasa ozi dị iche iche dị ka ụda na ihe ngosi iji kwalite mgbasa ozi. N'ime usoro mgbasa ozi mkpanaka, ọ na-adọta uche nke ikike mmadụ. Nke a bụ nchịkọta nke uru...
Ụgbọala mgbasa ozi Jingchuan na-enye gị ụzọ dị ọnụ ahịa iji zukọta ọnụ
Na mgbasa ozi mgbasa ozi n'èzí, iji ụgbọ ala mgbasa ozi aghọwo ihe na-emekarị, ma n'agbanyeghị nke ahụ, ọtụtụ ndị ahịa ga-echere ma hụ ahịa nke ụgbọ ala mgbasa ozi. Gịnị bụ mkpokọta mgbasa ozi...
Ụgbọala Mgbasa Ozi na-esonye na asọmpi mgbasa ozi n'èzí
Akụrụngwa mgbasa ozi dị n'èzí dị mfe ịdị njọ ka ụlọ ọrụ ndị a na-eji ụbọchị dum na-achọ ihe mgbasa ozi ọhụrụ. Mpụta nke ụgbọ ala mgbasa ozi LED na-enye ụlọ ọrụ mgbasa ozi n'èzí olileanya ọhụrụ. Kedu maka mgbasa ozi ụgbọ ala? Ka'...
Nhazi nke ihe ngosi LED agbakwasara ụgbọ ala
site admin na 21-03-06
Site na mmepe ngwa ngwa nke ihe ngosi LED, ihe ngosi LED na-agbanye ụgbọ ala na-apụta. E jiri ya tụnyere ndị nkịtị, nke edoziri na enweghị ike ịkwaga ihe ngosi LED, ọ nwere ihe dị elu chọrọ na nkwụsi ike, mgbochi nnyonye anya, shockproof na akụkụ ndị ọzọ. Usoro nhazi ya dịkwa iche iche dịka iche iche ...
Ọkachamara mmezi nke ọma Ikanam ụgbọala na-adọkpụ usoro
Na nkịtị LED ngosi nke electronic ngwaahịa, LED ụgbọala na-adọkpụ na n'èzí mobile ụgbọ ala mgbe a na-eji na gburugburu ebe obibi, na-agba ọsọ oge, wdg, niile nwere mgbagwoju nsogbu, ya mere na ojiji ọ bụghị naanị mkpa ntị ka ojiji nke nkà, ma na-mkpa mgbe mgbe. na-arụzi nke LED ụgbọala na-adọkpụ, ọ nwere ike ens ...
2021 JCT nwere ike ịhazigharị ụgbọ ala mgbasa ozi LED
site admin na 21-02-01
Ụlọ ọrụ na-abawanye ụba ejikọtala "ọrụ maka ọrụ ndụ ndị mmadụ" n'ime ọrụ ha bụ isi, dị ka ụlọ ọrụ ọkụ na ọkụ ọkụ, ụlọ ọrụ mmiri na ụlọ ọrụ ndị ọzọ metụtara nri, uwe, ụlọ na njem ndị mmadụ. JCT LED sava...
Ime mkpebi ịzụta ụgbọ ala mgbasa ozi LED mgbe ị ghọtara ụlọ ọrụ Jingchuan (JCT)
site admin na 21-01-15
Na mmepe nke ọha mmadụ, mgbasa ozi aghọwo ọzọ na ọzọ ukwuu , si omenala akwụkwọ akụkọ, nke nta nke nta kwalite ka leaflets, mobile phones, kọmputa….Mpụga mgbasa ozi ka penetrated n'ime akụkụ ọ bụla nke ndụ anyị. Ndị mmadụ esila na nnabata ike ruo ntakịrị ...
Nchịkọta nkenke nke ihe kpatara LED M ...
A Market Analysis of LED Media Vehicle R...
Ụgbọala ekwe ntị Led Maka ọrịre, Mgbasa ozi ụgbọ ala, Ngosipụta Led azụ, Ugbo ala mobaịlụ, Ihuenyo edu maka ụgbọ ala, Mgbasa ozi bọọdụ ụgbọ ala,